Masuuliyiin Ka Hadlay Doonidii Xeebta Bosaso Ku Caariday oo Maanta Laga Dejiyay Shixnadii Saarnayd[SAWIRRO/DAAWO] | SAHAN ONLINE
Masuuliyiin Ka Hadlay Doonidii Xeebta Bosaso Ku Caariday oo Maanta Laga Dejiyay Shixnadii Saarnayd[SAWIRRO/DAAWO]
Bosaso-Masuuliyiin ka tirsan gollaha wasiiradda Puntland, maamulka gobolka bari, Midka degmada Bosaso ayaa maanta ka hadlay doonidii 4tii bishan February ku soo caariday xeebta Bosaso,taasi oo la bilaabay in laga dejiyo shixnada saarnayd.
Guddoomiyaha gobolka bari Yuusuf Maxamed Wacays dhado oo ugu horrayn ka hadlay badbaadinta doonta iyo dhismaha dekeda macmalka, waxaa uu sheegay in si rasmi ah loogu guulaystay dhismaha marsada yar, lana bilaabay dejinta badeecadaha saaran, waxaa uu sheegay in howsha lagu badbaadinayo Doonta ay iska kaashadeen dowladda iyo shacabka Bosaso.
wuxuu u mahadceliyay dhammaan dadkii ka qaybgalay badbaadinta hantida saaran doonta, gaar ahaan wuxuu xusay guddiga ganacsatada ee uu madaxda u ahaa Sheekh Fu’aad Maxamuud X. Nuur, Injineeradii dhisayay dekeda, farsamayaqaanadii dhisayay baarjadaha iyo alxanka kontoonarada, waxaa kaloo uu mahadceliyay haweenkii iyo ciidamada amniga sugayay iyo guud ahaan shacabkii ka qaybgalay in la suurtagaliyo dhismaha marsada.
Sheekh Fu’aad Xaaji Nuur waxaa uu dhankiisa uga mahadceliyay dhammaan dadkii ka qaybgalay badbaadinta doonta, oo uu sheegay in howsha lagu badbaadinayo ay socotay muddo 11 maalmood, qaybtii u horraysay oo baabuur ahna laga soo dejiyay, waxaa uu halkaasi ka jeediyay gabay uu ku tilmaamayo shirkadihii iyo shakhsiyaadkii ka qaybgalay gurmadka doonta iyo kuwii dhabarka jeediyay.
Waxaa kaloo hadalo kooban ka jeediyay Duqa degmada Bosaso Yaasiin mire Maxamuud, Guddoomiyaha rugta ganacsiga Puntland Maxamuud Caydiid, Wakiilka Doonta iyo shakhsiyaad kale oo ka qaybgalay gurmadka doonta iyo hantida saarnayd.
Gabagabadii, Wasiirka dekeda Puntland Siciid Maxamed Raage, waxaa uu sheegay in go’aan laga gaari doona waxa ay ku dambayn doonto marsadaha badbaada ee la dhisay, waxaana uu u mahadceliyay dhammaan dadkii ka qaybgalay.